Ngisho nasezikhathini zasendulo izizwe ezihlukahlukene donsa lilo ezingelwa, badoba waxhumana kwezolimo. Utfola elihlobene ne-ukuphila wawobaba, ke ingenye yezingxenye ezithakazelisa kakhulu inqubo yesimanje bemivubukulo. Nokho, indima ekhethekile eyadlalwa mlando ngoba ubufakazi zesiko: ufakazi emidansweni amasiko yokuphila ezingaphandle kwamahora ukusebenza. Kancane kancane, ngosizo ukuthuthukiswa yokucabanga abantu baye bafunda ukwakha yobuciko emangalisa ngempela. Sikhuluma indalo efana nesakhiwo yezakhiwo. Abaningi babo baye bashiya inkumbulo ka yena kuphela encwadini yezindaba zemihla ngemihla. Kodwa abanye namanje sokujabulisa izivakashi nge ukubukeka kwayo engavamile.
Okwamanje, isintu uyazi omningi yobuciko emangalisa ekusebenziseni kwabo. Izinhlaka yezakhiwo yokuqala zadalwa kudala kokufika kobuKristu, Iningi ezinikele izinto eziphathelene nenkolo. Ukholo nothando onkulunkulu endowed isakhiwo idatha amandla engakaze ibonwe, okwabenza bakwazi ukuba adabule la makhulu eminyaka futhi ahlale angathintwanga isikhathi. Lokhu Buddhist amathempeli e Ladakh Le ekhazimulisa art Eros Kama Sutra amathempeli e-India, emzini Inca ePeru Machu Picchu nabanye abaningi.
Kuyaphawuleka ukuthi inani elikhulu lezinto zamasiko yayizimisele uthando. I art omkhulukazi kuqinisekiswa khona esigodlo okumnandi we Taj Mahal. Lena isakhiwo omkhulu yezakhiwo yakhiwa kuleli 17 BC leminyaka e-India, emzini Agra. Lokhu wobuciko yakhiwa yizisebenzi inzalo ka Tamerlane - uMbusi Shah Jahan - yokudumisa uthando olungapheli umkakhe lwesithathu, Mumtaz Mahal. Umkakhe amahle washona ngesikhathi sokubeletha - ingane yabo nantathu kwaletha ukufa sikanina. Emva kokushona kwakhe, Mumtaz Shah waphenduka grey ezinsukwini ezimbalwa. Ukuze uthando lwakhe wayenaye njalo, futhi ngemva kwalokho ngeke akukhohlwe othandekayo wakhe, futhi lo mbusi eyakhelwe esigodlweni.
Ngaphansi Taj Mahal kukhona amathuna ezimbili - mbusi, ngokufanele, umkakhe. Yakhelwe elimhlophe zemabula Mausoleum elise loMfula emfuleni Yamuna. Ekwakheni isakhiwo eyathatha engaphezu kwengu-20. Kunemibiko eyiqiniso ukuthi Shah Jahan, kwakusenhliziyweni yami ukwakhela ngebhange okuphambene emfuleni isakhiwo esifanayo yezakhiwo, kodwa abamnyama zemabula. Ngaphesheya ichibi ezimbili eziyinkimbinkimbi Kwakuhlelwe ukuxhuma kwebhuloho. Nokho, ukuqaphela isifiso sakhe akazange aphumelele ukubuyisana nomkakhe: i-emperor yehliswa esihlalweni sobukhosi indodana yakhe.
Lokhu Mausoleum kubhekwa 'iparele Indian. " Minyaka yonke ke evakashela izigidi izivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba. Njengamanje, esigodlweni olwenziwa umsebenzi wokuvuselela, ngakho ezinye eziyinkimbinkimbi ivaliwe emphakathini. Ekhulwini lama-20 (noma ngaphezulu ngokunembile ngo-1983) lokhu ukwakhiwa yezakhiwo wayebhekwa njengomuntu a World Heritage Site by UNESCO. Ngaphezu kwalokho, Mausoleum ingenye sezimangaliso eziyisikhombisa zezwe.
Okwamanje, abaklami emhlabeni wonke bafuna ube muhle nomunye, ukudala engavamile kakhulu futhi ngezinye izikhathi akuyona isakhiwo esisebenzayo. Wonke umuntu uzama ivelele, hhayi ucabanga sokusinda ngenzalo yabo. Uma izakhiwo zesimanje agcwele imigqa lwalugobile, izinto isivuno sisiningi kakhulu khona, izakhiwo yezakhiwo lasendulo ukukhuluma yobukhulu izizwe, usitshele ngenkolo kanye ubuciko, athwale izingodo aye nazo banner wenkazimulo iphakade. Imisele Roman, imibhoshongo baseGibhithe, amasonto ababhishobhi Europe, Asia le amathempeli - angaphezu kwelilodwa isizukulwane bayojabulela ubuhle namandla yobuciko yokudala, c impumelelo okuxubile kokuzama ukwenza ngokoqobo yini sihle.
Ukuthwebula waseConstantinople yi Crusaders
Amathiphu ambalwa zalokho okufanele ukwenze ngokushesha kwavele nyangazonke